Inhliziyo yomuntu njalo ngaphansi komthwalo. Imini nobusuku ke iphampa esiningi igazi, okubalulekile ukuze sithole umzimba. abantu Modern ngokuvamile ungacabangi mayelana inhliziyo yakho. Nokho, kungase ngokuzumayo isikhathi lapho crunching ukuzwa sigwaze ubuhlungu futhi dyspnea. Ngezinye izikhathi umuntu azizwa palpitations, okuyinto eyenzeka ngisho umzuzwana zokuzilibazisa. izinguquko sokugembula ka esivimba amanzi imisipha umsebenzi kubangela ukusebenza esincishisiwe, ubuthongo isiphithiphithi uphazamise nezimoto excitability ngokweqile. Ngenxa yalokho, umuntu uya ngokuxhumana onguchwepheshe, ngubani itusa ukuba lula isimo ukuphuza amaphilisi ngoba inhliziyo.
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi uma nezinkinga myocardium ngakwesokunene kumele kube izidakamizwa "Corvalol" noma "Validol". Nokho, le mithi abanakwethenjwa ngaso sonke isikhathi ngisize.
Kusho "Validol" Ngokuqinisekile aqede ubuhlungu enhliziyweni. Kodwa ayiphulule ayizwakali. Ezimweni ezinjalo kuyokusiza amaphilisi enkulu ngoba inhliziyo "nitroglycerin".
Nge ukucindezeleka ngokuvamile izinhlungu esifubeni. Enza isiguli nasekwesabeni ukufa. Ukuze kuxazululwe le mkhuba, ngesikhathi esifanayo kubalulekile ukuthatha esibhebheni "nitroglycerine" futhi "Validol". Bona ukuqeda ukucindezeleka futhi andise nemithambo yegazi yenhliziyo.
Nomuthi "Corvalol" uthulisa isimiso sezinzwa, kunciphisa ngokweqile kwenhliziyo, aqede uvalo kanye nenhliziyo encane, normalizes ukulala. Lesi sidakamizwa dilates imithambo yegazi, kanjalo sinezele igazi eligciniwe kwemisipha esivimba amanzi.
Ukuze banciphise imvamisa Kufinyeta esetshenziswa amaphilisi okuhlela inhliziyo, okuqondene isigaba we-beta-blocker. Khona-ke abakhululiwe ezivamile izindlela ezilandelayo: "Atenolol", "Lokren" "Concor" futhi "Dilatrend". Uma usebenzisa le mithi kuyadingeka ukulawula umfutho wegazi futhi inhliziyo isigqi.
Esikhathini zokugula we myocardium kubalulekile ukugwema nesimo esibucayi abanomfutho wegazi ophakeme. Ukuze wenze lokhu, asho into ephethwe yisifo senhliziyo ukuze kuncishiswe ukushuba odongeni semithambo kanye nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo kujwayeleke liningi igazi ukuncoma abaphathi izidakamizwa okuqondene ekilasini angiotensin prevraschayushego enzyme. La mathuluzi angakusiza kakhulu ukunweba ukuphila isiguli. Ezisetshenziswa kakhulu amaphilisi okuhlela inhliziyo, okungokwendlela ekilasini ACE inhibitor - "Lisinopril", "Enalapril" "Lisinopril", "Captopril", njll
Ukuze imithi nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo ubheke nemithi, okuyizinto blocker-calcium channel. Kahle kahle, lokhu kusho "Diltiazem" "Verapamil" "Amlodipine" futhi "Nifedipine". Lawa mafomu Isikali usimamise blood pressure kanye ukuvimbela esigulini phakathi kokuhlaselwa yisifo senhliziyo.
Amakhambi ngoba inhliziyo, okuyinto batusa Folk abelaphi kumele kuthathwe kanye kanye ukudlula Yiqiniso eyinhloko yokwelapha. Esimeni lapho kwakuphambene nemvelo ayitholiwe, kodwa ngezinye izikhathi ngazo futhi esibuhlungu esifubeni, izidingo kokuthola imithi njengoba izinyathelo.
The main abavikeli inhliziyo yilezi:
- lemon namafutha;
- ixhaphozi cottonweed;
Nezithasiselo Nenhliziyo, ekhishwa izinkampani ezahlukene kwemithi, aqukethe ukubunjwa bagxila izakhi zabo imeschiesya e izitshalo zokwelapha. Indlela yabo ekahle ngesikhathi samanje esasizosheshisa ijubane zokuphila, uma umuntu akanayo isikhathi esanele ukulungiselela infusions kanye Iziphungo.
Imijovo ye-asidi i-hyaluronic: incazelo, ukubuyekezwa, Izimo
Sedatives kusukela inkampani "Evalar": ". Tryptophan Formula nokuzola"
Yikuphi okungcono - "Phlebodia" noma "Detraleks"? Ukuqhathanisa izidakamizwa: ukusebenza, imiphumela emibi, amanani
"Ovariamin": yokusetshenziswa. Izibuyekezo futhi intengo ukulungiselela "Ovariamin"
Rugby. New Zealand - iqembu, okuyinto kuwufanele look
Yamaha NS-777 Acoustic System: ukucaciswa nokubuyekezwa
Shimano - engemuva derailleur ukulungiswa. Ukulungisa Shimano derailleur ezingemuva
Zu-23-2: izici, incazelo lobuchwepheshe, isithombe
Indlela ubophela isikhafu crocheted - izibonelo ezimbalwa
Kanjani ukuze ufunde ukuze wonge imali futhi sithole inkululeko ngokwezimali
Game I Ihlathi: indlela yokwenza umnsalo umcibisholo?
Izinto zesimanje umbono zokuhlukunyezwa medieval
Kuyini Narnia: The incazelo yegama elithi